Banyere Anyị - Taizhou Newkye Electronics Co., Ltd.
Bụrụnụ ndị na-akpaghị aka zuru ụwa ọnụ pụrụ ịdabere na onye!
Na NEWKYE, ebumnuche anyị bụ ime ka onye ọhụụ mara amara n’ụwa niile. Adrapara na ụlọ ọrụ nkà ihe ọmụma nke "Pụrụ Iche Elekwasị Anya", na site na-ekwenyere ndị a ma ama na ụlọ ọrụ na oru mmekọ na ụlọ na mba ọzọ, anyị emeela ka ndị ọzọ ụtụ maka ndị ahịa n'oge ogologo oge imekọ ihe ọnụ, ma nyere ha aka inwetakwu ihe ịga nke ọma na oge ọmụma , site na mmepe ohuru anyi nwere na teknụzụ na njikwa.
Ebe ọ bụ na ntọala ya, OZI esi ọnwụs na ebumnuche nke ihe ohuru, ngwa ngwa ma di nma iji meziwanye asọmpi nke ụlọ ọrụ. Anyịkwadoro ọtụtụ ụlọ ọrụ si mba dị iche iche gburugburu ụwa site n'ọtụtụ mgbalị ọtụtụ afọ .
Nke anyi ngwaahịa gụnyere servo moto, stepper moto, mechiri emechi akaghị stepper moto, servo spindle, ọkwọ ụgbọala, CNC njikwa, inverter wdg Anyị na-eme ngwọta akpaaka zuru oke maka ndị ahịa ma nyere ha aka ịchịkwa ọnụ ahịa, melite ụkpụrụ ụlọ ọrụ. ọ gbasaa ebe niile ọdabara ma mepụta. N'ihi ọrụ magburu onwe ya na ọnụahịa ezi uche dị na ya, ngwaahịa ndị NEWKYE ejiriwo ọtụtụ mee ihe na mpaghara akpaaka mmepụta ihe. dị ka: Lathe, CNC igwe, Machine center, osise igwe,Na-apụnara mmadụ iheot, Mbukota igwe, Akwa igwe, Digwe na-akwụ ụgwọ, Ptergba mmiri, Igwe Mpepu Plasma, Ligwe aser na Mjụọ na-eme igwe, wdg.
Pụrụ iche: Nye ngwaahịa zuru oke site na ọkachamara n'ihe anyị bụ adept!
Na-etinye uche: Na-egbo ndị ahịa afọ ojuju site na iji ndidi na-ege ntị n’echiche ha na ihe ha chọrọ!
Lekwasịrị anya: Mee ihe ọhụrụ mgbe niile site na iji otu obi na-etinye aka na ngwaahịa R&D!
Iguzosi ike n'ezi ihe: isi nke ụkpụrụ; Innovation: mkpụrụ obi nke ụkpụrụ; Pragmatism: ụkpụrụ nke ụkpụrụ
Na-achụso pụtara ìhè, gafere ahịa ina.
220 Volt Ọrụ Servo Motor, Ngwakọ Stepper Motor, Ọrụ Stepper Motor, Emechiela Loop Stepper Motor Driver, Servo Motor Actuator, 6 Waya Stepper Motor,